I-Binance e-India: Urhulumente wase-India uya kuthathela ingqalelo umgaqo we-cryptocurrency endaweni yokuvalwa - Cazoo
I-Binance e-India: Urhulumente wase-India uya kuthathela ingqalelo umgaqo we-cryptocurrency endaweni yokuvalwa
Ikhaya » Ikhaya » I-Binance e-India: Urhulumente wase-India uya kuthathela ingqalelo umgaqo we-cryptocurrency endaweni yokuvalwa
Iikhredithi zeefoto: Yogendra Singh
Njengoko kwinqaku elithetha ngalo Binance eAfrika, iindaba zehlabathi ezinomdla kum: ilizwe elinobungangamsha laseIndiya, urhulumente walo ongakhangeleki kakuhle kwii-cryptocurrensets, unokuba nokucinga okulandelayo: ingxelo entsha iphakamisa imeko eyomeleleyo kulawulo lwemali egcina imali eIndiya, endaweni yesithintelo.
Ukucinga kwakhona kwe-India kwi-cryptocurrensets
Il ilizwe lesibini elinabemi abaninzi emhlabeni akazange afune ngokwenene ukuqonda ilizwe le-crypto.
Sele ikho kwi-2018 Ibhanki enguVimba yaseIndiya ha Akuvunyelwe kuzo zonke iinkampani ezisebenza nolawulo lwayo ukusebenza ngee-asethi zedijithali. Kodwa isililo yayingumngxunya emanzini: kwiminyaka emibini kamva, INkundla Ephakamileyo yelo lizwe yasirhoxisa isigqibo.
AmaIndiya abonakalise umdla onamandla kweli candelo, abasemagunyeni baqhubekile nokucebisa ngokufaka isithintelo ngokubanzi. Ngo-Matshi, Iingxelo ziye zavela ebonakalise ukuba ilizwe linezicwangciso zokwaphula umthetho ukusebenzisana ne-bitcoin kunye nezinye ii-altcoins.
ICOMPRA IBITCOIN KWIMALI, NGESIPHUMO SE-20%!
Ngokutsho njengoko kuchaziwe Ukusuka kwi-The Economic Times, urhulumente angatshintsha ingqondo, azifumanele ngokuchasene namaziko awomeleleyo afuna oku, kunye neNkundla ePhakamileyo sele igqibile. Icaphula imithombo emithathu eyaziyo ingxoxo zangaphakathi, ingxelo iqaphele ukuba abasemagunyeni "Unokwenza iphaneli entsha yeengcali ukuphanda ukubakho kokulawula i-cryptocurrencies e-India"Endaweni yokuyekisa.
Umbono wowayengunobhala wezezimali uSubash Garg owathi ngo-2019 wacebisa urhulumente ukuba angajongani neenkampani ezisebenza nge-crypto ngoku "ngumbono ophelelwe lixesha", ngokwekomiti ejonge ukusombulula le ngxaki.
Ii-asethi zedijithali endaweni yeemali
Imithombo yangaphakathi karhulumente oxele ezi ndaba ikwatsho ukuba isebe lezemali litshintshe indawo yalo ukulandela ukunyuka okukhulu kumthamo wokurhweba wamaIndiya ngokwawo, athe qwa kukuhamba kwaye anolwazi malunga nokuthenga ii-cryptocurrensets.
Ikomiti iqhubele phambili kuhlalutyo lwayo kuba igqibe ekubeni iza kusebenza ekusebenziseni itekhnoloji blockchain "Ukuphuculwa kwetekhnoloji", kwaye iya kuphakamisa iindlela ezintsha zokulawula ii-cryptocurrensets njengezinto zedijithali endaweni yeemali.
Ingxelo yekomiti ibandakanya ngentsebenziswano nebhanki ephambili kuphuhliso nokumiliselwa kwe Idigital yedijithali kutshanje kucetywayo (CBDC).